INucynta vs. oxycodone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Inkampani, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Ukuphila Kahle Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Ukuphila Kahle Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani Ezokuzijabulisa Imfundo Yezempilo, Izindaba Ezempilo Cindezela Imidlalo
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> INucynta vs. oxycodone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
INucynta vs. oxycodone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
INucynta ne-oxycodone kuvunyelwe kabili yi-FDA i-opioid imishanguzo kadokotela ekhonjisiwe yokwelashwa kobuhlungu obukhulu, obubuhlungu. Ngokuvamile zisetshenziselwa izinhlungu ezingenakhululwa yimithi engeyona i-opioid, noma lapho isiguli singakwazi ukubekezelela ezinye izindlela. Yomibili le mithi yezinhlungu ihlukaniswa njengezidakamizwa ( ISheduli II ), okusho ukuthi banamandla aphezulu okuhlukumeza noma ukuncika.
Indlela iNucynta esebenza ngayo ayiqondakali ngokuphelele. Olunye ucwaningo lukhombisile ukuthi iNucynta iyi-mu receptor (i-pain receptor) agonist kanye ne-norepinephrine reuptake inhibitor, eholela ekuphumuleni kobuhlungu. I-Oxycodone isebenza ngokubophezela kuma-mu receptors ebuchosheni, okwenza buthakathaka noma kuvimbele amasiginali wezinhlungu, okuholele ekuphumuleni kobuhlungu.
Ngoba yomibili le mithi inamandla amakhulu, ijwayele ukusetshenziswa ezimweni zokuphathwa kobuhlungu lapho isidambisi sezinhlungu (ezingezona ezokudambisa izidakamizwa) ngeke sisebenze noma singabekezeleleki. Yize yomibili le mithi isetshenziselwa ubuhlungu obukhulu, inokuhlukahluka okuningi, esizokuchaza ngezansi.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweNucynta ne-oxycodone?
INucynta (tapentadol) iyi-opioid, noma i-narcotic, i-analgesic (painkiller). Itholakala ngegama lomkhiqizo njengokubili ithebhulethi ekhishwa ngokushesha futhi ekhishwe isikhathi eside. Ithebhulethi ekhishwe isikhathi eside ibizwa ngeNucynta ER. Umthamo wokuqala ungama-50 mg kuya ku-100 mg njalo emahoreni amane kuya kwayisithupha njengoba kudingeka ngobuhlungu. Umthamo ungalungiswa ngudokotela wakho, kanti umthamo omkhulu ngu-600 mg ngosuku.
I-Oxycodone futhi iyi-generic opioid analgesic (ne-oxycodone IR, ekhishwa ngokushesha) futhi itholakala ngegama lomkhiqizo njenge-Oxycontin — ithebhulethi ekhishwa isikhathi eside. Umthamo uyehluka, kepha umthamo ojwayelekile wamaphilisi we-oxycodone akhishwa ngokushesha ngu-5 kuye ku-15 mg njalo emahoreni amane kuya kwayisithupha njengoba kudingeka ngobuhlungu.
Umehluko omkhulu phakathi kweNucynta ne-oxycodone
Isigaba sezidakamizwa I-opioid (narcotic) analgesic I-opioid (narcotic) analgesic
Yini igama elejwayelekile / lomkhiqizo? Okujwayelekile: I-Tapentadol Umkhiqizo: I-OxyIR (ukukhishwa ngokushesha), i-Oxycontin (esebenza isikhathi eside)
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebhulethi ekhishwa ngokushesha
Ithebhulethi yokukhishwa enwetshiwe Ithebhulethi ekhishwa ngokushesha
I-capsule ekhishwa ngokushesha
Uyini umthamo ojwayelekile? Okokuqala:
50 mg ukuze 100 mg njalo 4 ukuze 6 amahora njengoba kudingeka. Umthamo ungalungiswa ngudokotela njengoba kudingeka. Umkhawulo ka-700 mg ngosuku ngosuku lokuqala lokwelashwa, bese umthamo omkhulu ungama-600 mg ngosuku ngemuva kosuku lokuqala Ithebulethi ekhishwa ngokushesha:
5 kuya ku-15 mg njalo emahoreni ama-4 kuye kwayi-6 njengoba kudingeka
Ithebhulethi ekhishwe enwetshiwe:
20 mg njalo emahoreni ayi-12
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi esifushane, singasetshenziswa isikhathi eside ngokuya ngesimo esiphathwe (njengobuhlungu obungapheli) nempendulo Isikhathi esifushane, singasetshenziswa isikhathi eside ngokuya ngesimo esiphathwe (njengobuhlungu obungapheli) nempendulo
Ufuna intengo engcono kuNucynta?
Bhalisela izexwayiso zamanani eNucynta bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Imibandela ephathwa yi-Nucynta ne-oxycodone
Kokubili iNucynta ne-oxycodone kunenkomba eyodwa yokwelashwa, okungukulawula ubuhlungu obunzima kubantu abadala obunzima ngokwanele ukudinga i-opioid analgesic, nalapho ukwelashwa okunye kunganele noma kungabekezelelwa.
Isimo I-Nucynta I-Oxycodone
Ukuphathwa kobuhlungu obunzima kubantu abadala obunzima ngokwanele ukudinga i-opioid analgesic, nalapho ukwelashwa okunye kunganele Yebo Yebo
Ngabe iNucynta noma i-oxycodone isebenza kangcono?
Phakathi ku funda ngokuqhathanisa i-Nucynta ekhishwa ngokushesha ne-oxycodone ekhishwa ngokushesha ezigulini ezinobuhlungu obubuhlungu emuva obuphakathi nendawo, zombili lezi zidakamizwa kwatholakala ukuthi ziphephe futhi zisebenza ngendlela efanayo ekwelapheni ubuhlungu beqolo, kanye nobuhlungu bomlenze obuhambisana nabo. Iziguli zaseNucynta zibe nemiphumela engemihle kangako ehlobene nesisu.
Phakathi ku funda uma kuqhathaniswa amandla okuhlukunyezwa kweziguli ezithatha iNucynta noma i-oxycodone, iNucynta kutholakale ukuthi inamandla amancane okuhlukunyezwa.
Umuthi osebenza kahle kakhulu kuwe kufanele unqunywe udokotela wakho kuphela ozobheka izimo zakho zezokwelapha, umlando, neminye imithi oyiphuzayo.
izindlela zemvelo zokususa i-thrush
Ukuhlanganisa kanye nezindleko ze-Nucynta vs. oxycodone
Ngenxa yemithetho yombuso, uma uthola i-opioid painkiller okokuqala ngqa, kungenzeka ukuthi uzothola inani elincane.
Ukutholakala komshuwalense kuyehluka ngeNucynta. Njengoba kubiza kakhulu futhi kutholakala kuphela ngegama lomkhiqizo, i-copay yakho ingaba phezulu, noma umuthi ungadinga i- ukugunyazwa kwangaphambili enkampanini yakho yomshuwalense. INucynta imvamisa ayimboziwe yiMedicare Part D. Inani elikhishwa ephaketheni leNucynta 50 mg, amaphilisi angama-30 imvamisa angaba ngama- $ 250 kodwa ungawathola ngemali ephansi njengo- $ 211 ngesaphulelo se-SingleCare.
I-Oxycodone ivame ukumbozwa umshwalense kanye ne-Medicare Part D. Inani elikhishwa ephaketheni lamaphilisi angama-30, 5 mg lingabiza cishe amaRandi ayi-100 kepha ungasebenzisa isigqebhezana esisodwa emakhemisi abambe iqhaza ulithole ku- $ 36.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Iyahlukahluka Yebo
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare Part D? Akunjalo Yebo
Umthamo ojwayelekile 50 mg, # 30 amaphilisi 5 mg, # 30 amaphilisi
Inkokhelo ejwayelekile yeMedicare Part D $ 95- $ 482 $ 2- $ 56
Izindleko ze-SingleCare $ 211 + $ 36- $ 62
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-Nucynta vs. oxycodone
Imiphumela emibi kakhulu yeNucynta yisicanucanu, ukuhlanza, ukozela, isiyezi, ukuqunjelwa, umlomo owomile nokunwaya. Ukudangala okukhulu kokuphefumula (ukuphuza ukuphefumula, ukungatholi i-oxygen eyanele), okungasongela impilo noma kubulale, kungenzeka.
Nge-oxycodone, amaphesenti ngqo awabikwa, ngaphandle kokuthi imiphumela emibi yenzeke ngeziguli ezinkulu noma ezilingana nezi-3%. Imiphumela emibi evame kakhulu isicanucanu, ukuqunjelwa, ukuhlanza, ikhanda elibuhlungu, i-pruritus (ukulunywa), ukuqwasha, isiyezi, ukuba buthakathaka kanye nokozela. Ukusabela okubi kakhulu kungahlanganisa ukucindezeleka kokuphefumula, ukuboshwa ngokuphefumula (ukuma ukuphefumula), ukuboshwa kwenhliziyo (ukulahleka okungazelelwe kokusebenza kwenhliziyo, ukuphefumula, nokwazi), umfutho wegazi ophansi, kanye / noma ukwethuka.
Ngenxa yobungozi obukhulu, kubaluleke kakhulu ukuthi uma uthatha iNucynta noma i-oxycodone, ukuthi uphuze umuthi ngendlela ebekiwe futhi ungathathi imithamo eyengeziwe. Kufanele futhi ubhekwe nengcindezi yokuphefumula, ikakhulukazi lapho uqala omunye wale mithi noma ngesikhathi sokushintsha komthamo.
liyini izinga elijwayelekile likashukela egazini kumuntu onesifo sikashukela
Kungenzeka ezinye izehlakalo ezimbi. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu olugcwele lwemiphumela emibi.
Isicanucanu Yebo 30% Yebo ≥3%
Ukuhlanza Yebo 18% Yebo ≥3%
Ukuqunjelwa Yebo 8% Yebo ≥3%
Umlomo owomile Yebo 4% Yebo % akubikiwe
Ukozela Yebo ishumi nanhlanu% Yebo ≥3%
Isiyezi Yebo 24% Yebo ≥3%
Ukulunywa Yebo 5% Yebo ≥3%
Umthombo: DailyMed ( I-Nucynta ), IDailyMed ( i-oxycodone )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kwe-Nucynta vs. oxycodone
Kusetshenziswa i-benzodiazepines noma amanye ama-CNS depressants, kufaka phakathi okunye imithi ye-opioid , ngokuhlanganiswa neNucynta noma i-oxycodone kungaholela ekucindezelekeni kwegazi okuphansi, ukucindezelwa ukuphefumula, ukukhukhumala okujulile, ikhoma, kanye / noma ukufa. Inhlanganisela kufanele igwenywe. Kodwa-ke, uma ingekho enye indlela etholakalayo, kufanele kusetshenziswe imithamo ephansi kakhulu yomuthi ngamunye ngesikhathi esifushane, futhi isiguli kufanele sibhekwe ngeso elibukhali, ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa naphakathi nanoma yiluphi ushintsho kumthamo.
Ukuthatha i-Nucynta noma i-oxycodone ngezidakamizwa ezandisa i-serotonin nakho kungandisa ubungozi isifo se-serotonin , isimo esisongela impilo esibangelwa i-serotonin eningi kakhulu. Le mithi ifaka imishanguzo efana ne-serotonin reuptake inhibitors, izidambisi zemisipha, i-MAO inhibitors (i-MAO inhibitors akufanele isetshenziswe ezinsukwini eziyi-14 zeNucynta noma i-oxycodone), kanye nama-triptans e-migraine.
Ukuthatha i-oxycodone ngemithi ethile ehlanganiswa ne-enzyme ebizwa nge-CYP3A4 noma i-CYP2D6 kungahle kuholele ekusebenzisaneni kwezidakamizwa. Le mithi yaziwa njenge-enzyme inhibitors futhi ifaka ama-macrolide antibiotics, ama-azole antifungals, kanye ne-protease inhibitors. Ukuzisebenzisa ndawonye ne-oxycodone kungaholela emazingeni aphezulu we-opioid, engaba yingozi kakhulu. Le mithi ihlangana ne-oxycodone, kepha hhayi iNucynta.
Ezinye izidakamizwa, ezaziwa ngokuthi ama-enzyme inducers, zinomphumela ohlukile njengama-inhibitors, zehlisa izinga le-opioid ukuze zingasebenzi noma zingadala nezimpawu zokuhoxa. Ama-inducers angathinta iNucynta noma i-oxycodone.
Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa I-Nucynta I-Oxycodone
I-Lorazepam I-Benzodiazepines Yebo Yebo
I-Tizanidine Ukuphumula kwemisipha Yebo Yebo
I-Fluoxetine Izidambisi Yebo Yebo
I-Tranylcypromine Ama-inhibitor e-MAO Yebo Yebo
I-Tolterodine Izidakamizwa ze-Anticholinergic Yebo Yebo
Zolmitriptan Ama-Triptans we-migraine Yebo Yebo
I-Ritonavir I-CYP3A4 noma i-CYP2D6 inhibitors Akunjalo Yebo
Phenytoin Ama-inducers we-CYP3A4 Yebo Yebo
Izexwayiso ze-Nucynta ne-oxycodone
Kunesixwayiso esibhakelwe ku-Nucynta ne-oxycodone, okuyisixwayiso esiqine kakhulu esidingwa yi-FDA (United States Food and Drug Administration).
Izidakamizwa ze-opioid zinengozi yokulutha, ukuhlukunyezwa nokusetshenziswa kabi. Lokhu kungaholela ekweqeni ngokweqile nasekufeni. Iziguli kufanele zihlolwe ubungozi ngaphambi kokuthatha i-opioid futhi kufanele ziqashwe ngokucophelela.
Ama-opioid angadala ukucindezeleka okukhulu, okusongela impilo, noma okubulalayo. Iziguli kufanele zibhekwe ngokucophelela, ikakhulukazi lapho kuqala ukwelashwa, nangemva kokushintsha komthamo.
Ukungeniswa ngengozi, ikakhulukazi yizingane, kungaholela ekudluleni ngokweqile okubulalayo. Iziguli kufanele zivikele ama-opioid lapho izingane zingafinyeleli kuwo, futhi ngaphansi kokukhiya nokhiye uma kungenzeka.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-opioid ngesikhathi sokukhulelwa kungadala isifo sokuhoxiswa kwe-opioid neonatal, okungasongela impilo uma kungaziwa nokwelashwa.
Usebenzisa ama-benzodiazepines afana ne-Xanax, noma amanye ama-CNS depressants, afana namanye ama-opioid (noma utshwala), kungaholela ekuthambekeni okujulile, ukucindezelwa ukuphefumula, ikhoma nokufa. Ukuhlanganiswa kwama-opioid nama-benzodiazepines kufanele kugwenywe uma kungenzeka. Iziguli okufanele zithathe le nhlanganisela ngenxa yezinye izindlela ezingasebenzi kufanele zinikezwe umthamo ophansi kakhulu osebenza isikhathi esifushane futhi kufanele ziqashwe ngeso elibukhali.
Iziguli ezinokucindezeleka okukhulu kokuphefumula, i-asthma ebucayi / ebucayi e-bronchial esimweni esingagadiwe, ukuvinjelwa kwamathumbu, noma i-hypersensitivity kunoma yiziphi izithako akufanele zisebenzise i-Nucynta noma i-oxycodone.
INucynta noma i-oxycodone akufanele isetshenziswe ezigulini ezinesifo samaphaphu esingamahlalakhona noma ezigugile noma ezigulayo.
I-Serotonin syndrome kungenzeka, ikakhulukazi ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ezandisa amazinga e-serotonin, njenge-anti-depressants. Iziguli kufanele ziqashwe ngokushintshwa kwesimo sengqondo (ukuyaluza, ukusangana), izinguquko kumfutho wegazi, ukungavumelani, kanye / noma izimpawu zesisu ezifana nesicanucanu, ukuhlanza noma isifo sohudo. Isiguli kufanele sifune ukwelashwa ngokushesha uma kukhona kulezi zimpawu ezenzekayo ngoba i-serotonin syndrome iyingozi kakhulu futhi ingabulala.
Ukwehluleka kwe-adrenal kungenzeka, imvamisa ngemuva kwenyanga eyodwa. Iziguli kufanele zifune ukwelashwa uma zithola isicanucanu, ukuhlanza, ukulahlekelwa isifiso sokudla, ukukhathala, ubuthakathaka, isiyezi, kanye / noma umfutho wegazi ophansi.
INucynta noma i-oxycodone ingadala umfutho wegazi ophansi.
I-Nucynta noma i-oxycodone akufanele isetshenziswe ezigulini ezinokukhubazeka okungazi lutho noma ku-coma.
INucynta noma i-oxycodone ingakhuphula ubungozi bokuquleka ezigulini ezinenkinga yokuquleka.
I-Nucynta noma i-oxycodone akufanele ihoxiswe ngokungazelelwe, kodwa esikhundleni salokho kufanele ithayishwe kancane.
INucynta akufanele isetshenziswe ezigulini ezinenkinga enkulu yesibindi noma yezinso.
Ungashayeli noma usebenzise imishini uze wazi ukuthi umuthi ukuthinta kanjani.
Ama-opioid angaphephile angaba yingozi ebulalayo kunoma ngubani omunye ekhaya, kufaka phakathi izivakashi. Gcina ngokuvikelekile, lapho kungabonakali futhi kufinyeleleke ezinganeni, nasendaweni lapho abanye bengatholakali khona. Buza uchwepheshe wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuthi angawalahla kanjani ama-opioid angasetshenziswanga endaweni yangakini.
Uma uthatha noma iyiphi i-opioid, khuluma nodokotela wakho ngemithi kadokotela ye-naloxone, umuthi ongaphatha ukudlula ngokweqile kwe-opioid esimweni esiphuthumayo.
Ngoba azikho izifundo ezilawulwa kahle kwabesifazane, iNucynta noma i-oxycodone akufanele isetshenziswe ekukhulelweni. Sebenzisa ama-opioid ngesikhathi sokukhulelwa, noma ngabe kwenzelwa ukusetshenziswa kwezokwelapha noma okungezona ezokwelapha, kungadala ukuncika emzimbeni enganeni, futhi kungaholela ekukhuculweni kwe-neonatal opioid syndrome ngemuva nje kokuzalwa.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana neNucynta vs. oxycodone
INucynta iyi-narcotic, noma i-opioid, i-painkiller esetshenziselwa ukwelashwa kobuhlungu obukhulu. Itholakala ngegama lomkhiqizo njengokukhishwa ngokushesha (i-Nucynta) noma ithebhulethi ekhishwa enwetshiwe (i-Nucynta ER).
I-Oxycodone iyi-painkiller ye-narcotic esetshenziselwa ukwelapha ubuhlungu obukhulu. Itholakala ngohlobo olujwayelekile njengethebhulethi ekhishwa ngokushesha noma i-capsule kanye negama lomkhiqizo njenge-Oxycontin esebenza isikhathi eside.
Ngabe iNucynta ne-oxycodone ziyefana?
Cha, kodwa ziyefana. INucynta iqukethe i-tapentadol. I-Oxycodone ne-tapentadol womabili ama-opioid analgesics (amaphilisi ezinhlungu) kepha anokungafani okuthile, okufana nomthamo, intengo, nemiphumela engemihle, echazwe ngenhla.
Ngabe iNucynta noma i-oxycodone ingcono?
Phakathi ku funda uqhathanisa lezi zidakamizwa ezimbili , INucynta ne-oxycodone nazo zaziphephe futhi zisebenza ngendlela efanayo ekwelapheni izinhlungu ezisezingeni eliphansi. INucynta ingaba nayo amandla okuhlukumeza aphansi . Khuluma nodokotela wakho uma i-Nucynta noma i-oxycodone ikufanele, uma ezinye izinto zokudambisa izinhlungu zingakusizanga noma uma ungakwazi ukubabekezelela.
Ngingayisebenzisa yini iNucynta noma i-oxycodone ngenkathi ngikhulelwe?
Cha. INucynta noma i-oxycodone (noma i-opioid, efana ne-Percocet) ingadala i-neonatal abstinence withdrawal syndrome , okungaba yingozi noma kusongele impilo enganeni.
Ngingayisebenzisa yini iNucynta noma i-oxycodone ngotshwala?
Cha Ukuthatha iNucynta noma i-oxycodone nge utshwala kungakhuphula ubungozi bemiphumela emibi efana nokudangala kokuphefumula (ukungayitholi i-oxygen eyanele, nokuphefumula kwakho kwehle) futhi kungaholela nasekuqulekeni noma ekufeni.
ungabona kanjani udokotela ngaphandle komshwalense wezempilo
Yini enamandla ukudlula iNucynta?
Ukweqiwa okuphezulu kwama-opioid kuhlotshaniswa nengozi ephezulu yokweqisa ngokweqile nokufa, ngokusho kwe- i-CDC . Kubalulekile ukubuka inani eliphelele lansuku zonke lama-opioid bese uguqulela ku-MME (morphine milligram equivalents) ukubala ubungozi bokweqisa ngokweqile kanye nesidingo sokuqapha okusondele. Uma umthamo wakho weNucynta ungakusebenzeli, khuluma nodokotela wakho ngokushintsha umthamo noma ngokushintsha umuthi. Musa ukwandisa umthamo ngokwakho, ngaphandle kokukhuluma nodokotela wakho. Ungalokothi uthathe i-opioid ye sebenzisa ngaphandle kwalapho wawunqunyelwe khona .
Ngabe iNucynta iyefana ne-tramadol?
INucynta inamandla futhi inamandla okulutha ukwedlula i-tramadol — INucynta iyisidakamizwa soHlelo II, kanti i-tramadol iyisidakamizwa soHlelo IV. INucynta nayo ibiza kakhulu kune-tramadol, etholakala kuzo zombili izinhlobo kanye nohlobo (Ultram). Iziguli eziningi zithola ukuthi i-tramadol yanele ukulawula izinhlungu zazo.
Ngabe iNucynta ibangela ukwehla kwesisindo?
Iziguli ezingaphansi kuka-1% eNucynta ER Phase 2 no-3 zokuhlolwa kwemitholampilo zine- ukuncipha kwesisindo kodwa inani lokwehlisa isisindo alibikwanga.
I-FDA ivuma ukushintshwa kwe-Rx-to-OTC yelotion lotice yekhanda
okungcono kakhulu kokucindezela ukukhwehlela kokuphika
Ngabe i-albuterol inhaler izovela ekuhlolweni kwezidakamizwa
ingabe ama-walgreens athatha i-medicaid yokushaywa umkhuhlane
ungathatha i-melatonin engaphezu kweyodwa ngesikhathi
umuntu angaba yini ongabekezeleli i-lactose kamuva empilweni